Ngatishandise Linux paGoogle Chrome / Chromium | Kubva kuLinux
Ngatishandise Linux paGoogle Chrome / Chromium
¡Download iyo nyowani kuwedzera de Ngatishandise Linux nokuti Google Chrome / Chromium! Ingori a kuwana kwakananga Asi hapana munhu anogona kuramba kuti inoratidzika kunge yakanaka uye inobatsira zvakanyanya kukurumidza kuwana kune dzichangoburwa nhau paLinux uye yemahara software.
Iko kuiswa kwe plugin kunofanirwa kuitwa "nemaoko" nekuti kuburitswa kwayo mu online yekuwedzera raibhurari Google inoda kuti mugadziri anoirodha abhadhare mari ine mwero ye $ 5 (kamwe chete). Kutendeseka, ini handina kufunga kuti zvaive zvakakodzera kuvabhadhara. Uyezve, iyo "manual" kuisirwa haisi iyo yakaoma, sezvatichaona pazasi.
Kumbira: Wakatonyoreswa semusimudziri muraibhurari yekuwedzera yeGoogle uye ungade kutibatsira kutakura iyi yekuwedzera Ndapota usazeza kupinda udza mashoko nesu.
1.- Famba iyo Zvishandiso> Yekuwedzera menyu.
2.- Dhawunirodha iyo .crx faira kubva Ngatishandise Linux.
Dhawunirodha plugin yeGoogle Chrome
3.- Enda kune iyo folda uko iyo yakadzingwa faira yakachengetedzwa.
4.- Dhonza iyo faira uye uridonhedze pawindo rekuwedzera rakavhurwa panongedzo 1.
5.- Meseji ichaonekwa ichitibvunza kana tichida kuisa. Zviripachena mhinduro ndiHungu.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, iwe paunovhura tebhu nyowani, iwe unozokwanisa kuwana Ngatishandise Linux zvakanyanya nyore.
Ndinovimba unonakirwa! Ndakamirira makomenti ako ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Ngatishandise Linux paGoogle Chrome / Chromium
Yakanaka ini kuiisa izvozvi!
izvo zvinoenda, izvo hazvina basa, ini ndoda iyo adobe flash plugin!
Inowanikwa kurodha pasi Firefox 17 uye ikozvino yave yemagariro
Zadza runyorwa rwemalensi eUbuntu